विपी काण्डमा ठेकेदार शुशील झा पनि तानिए - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ विपी काण्डमा ठेकेदार शुशील झा पनि तानिए
विपी काण्डमा ठेकेदार शुशील झा पनि तानिए
हेल्थ आवाज आईतबार, २०७६ असार २९ गते, ११:३१ मा प्रकाशित
काठमाडौं –आठ लाख घुससहित पक्राउ परेका विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियार र उनका भतिजा डा. रामहरि रौनियारलाई मुद्दा दायर गर्न केही समय लाग्ने भएको छ ।
डा.रौनियारलाई विशेष अदालतमा म्याद थप गरेर थप अनुसन्धान गरिने अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । दुवै जनालाई शुक्रबार काठमाडौं ल्याइएको थियो । अख्तियारका सहायक प्रवक्ता उपसचिव मदन कोइरालाले डा. रौनियारको बारेमा अनुसन्धान गर्न धेरै बाँकी रहेको बताए । ‘को को संलग्न छन लगायतका विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले अलिकति समय त लागिहाल्छ,’ कोइरालाले भने ।
प्रतिष्ठानको भवनको निर्माणाधिन संरचनामा डा. रौनियारले करोडौं घोटाला गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको छ । भवन निर्माणमा ठेक्का पाएका सुशील झा पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन । ठेकेदार झाले नै घुसका लागि पटक-पटक दबाब दिएको टेलिफोन रेकर्ड अख्तियारलाई उपलब्ध गराएका थिए ।
डा. रौनियारबाट ८ लाख रुपैंया घुससहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको टोलीले बिहिवार रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । अख्तियार केन्द्रीय कार्यलयका एसपी हेम थापाको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । उनी घुस रकम लिएर निवासमा गएलगत्तै पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । पक्राउ परेका डा. रौनियार उपकुलपति राजकुमारका भतिजा हुन ।
२०७३ सालमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको पालामा डा. रौनियार उपकुलपतिमा नियुक्त भएका थिए । रेडियोलोजिष्ट डा. रौनियार प्रतिष्ठानका छैठौं उपकुलपति हुन । भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइएपछि प्रतिष्ठान संचालक समिति (सिनेट)बैठकले चार महिना अघि सर्वसम्मतरुपमा पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
गत फागुन १६ र १७ गते बालुवाटारमा बसेको प्रतिष्ठानको संचालक समिति सिनेट बैठकले हटाउने निर्णय गरेको थियो । प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको सिफारिसको आधारमा संचालक कुलपति प्रधानमन्त्री केपि ओलीले रौनियारलाई पदबाट हटाउने निर्णयलाई सदर गरेका थिए । फागुन २६ गते बर्खास्त भएपछि डा. रौनियारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
गत चैत ४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले पदबाट हटाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि डा. रौनियारले पुनः पदबहाली गरेका थिए ।